Isu tinofara kwazvo kune yedu inotevera webinar neMeltwater pane Zvemukati uye Kwevatengi Nzendo. Tenda kana kwete, zvemukati kushambadzira zvine uye zvinoramba zvichichinja. Kune rimwe divi, hunhu hwevashandisi hwashanduka mukugadziriswa kuri kuita zvirimo uye kuti zvirimo zviri kukanganisa sei rwendo rwevatengi. Kune rimwe divi, masvikiro akachinja, kugona kuyera mhinduro, uye kugona kufungidzira kufarirwa kwezviri mukati. Ive neshuwa yekunyoresa